ग्रीन टी पिउन मन पर्छ ? जानौं मात्रा र पिउने उचित समय | Hamro Doctor News
ग्रीन टी पिउन मन पर्छ ? जानौं मात्रा र पिउने उचित समय
आफूलाई स्वस्थ, सुन्दर र तन्दुरुस्त राख्न चाहनेले विभिन्न उपाय अपनाउने गर्छन् । व्यायामदेखि खानपान र नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउने गर्छन् । त्यसमापनि पछिल्लो समय ग्रीन टी एकदमै चर्चित बनेको छ, सबैका लागि । ग्रीन टी सेवन नगर्ने सायदै कोहि छन् होला, तर, सहर बजारमा । विशेषगरी कामकाजी व्यक्तिहरु र फिटनेशलाई बढी प्राथमिकता दिनेहरुले ग्रीन टी सेवन गर्न बढी रुचाउँछन् ।
धेरैजसो मानिस तौल कम गर्नुपरे उनीहरूको पहिलो रोजाइ ग्रीन टी हुन्छ । त्यसबाहेक छालालाई स्वस्थ राख्न, मेटाबोलिज्म बढाउन र लामो समयसम्म सक्रिय रहन पनि ग्रीन टीले मद्दत गर्छ । तर, ग्रीन टी फाइदाजनक हुन्छ भन्दैमा जतिबेला मन लाग्यो त्यतिबेला पिउनु हुँदैन । सामान्यतया धेरैजसोले यस्तै गल्ती गर्छन् ।
Last modified on 2021-07-18 09:33:35